प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रश्न, कमरेड ३० किलोको माला लगाएर फूलको बजार बढाउँदै देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने ?? « News24 : Premium News Channel
प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रश्न, कमरेड ३० किलोको माला लगाएर फूलको बजार बढाउँदै देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने ??
ठमाडौं । ३० किलोको माला लगाएको भन्दै नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टाईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चर्को आलोचना गरेका छन्। शनिबार बिहान प्रचण्डले एक कार्यक्रममा ३० किलोको माला लगाएको भन्दै बाबुरामले व्याङ्ग्यात्मक आलोचना गरेका हुन्। ट्विटरमा प्रचण्डको आलोचना गर्दै बाबुरामले ३० किलो मालाको राजनीतिक अर्थशास्त्रको नियम प्रतिपादन गर्न लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
‘समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा मान्नुहुने मेरा प्रिय कमरेडले ३० किलोको माला ग्रहण गर्नुभएको फूलको बजार विस्तार गरेर देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने नयाँ राजनीतिक अर्थशास्त्रको नियम प्रतिपादन गर्नलाई हो कि कसो हो प्रकाश पारिदिनुभए हामी सबै अनुगृहित हुनेथियौं ’, बाबुरामले भनेका छन्।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, हामीले राजनीतिक स्थिरता र विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ। चुनावी अभियानका क्रममा जनताले विकास र समृद्धिको आकांक्षा बोकेर नै वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका हुन्।’
विचार मिलेकै कारण एमाले–माओवादीबीच एकता हुन लागेको बताउँदै प्रचण्डले पार्टी एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नभएको प्रष्ट पारे। ‘विचार मिल्ने पार्टीहरु मिल्दा नै देशको हित हुन्छ। देशको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर नै पार्टी एकताको संकल्प गरेका हौं, हाम्रो एकताका कसैका विरुद्ध लक्षित छैन। पार्टी एकिकरणमा कुनै शंका नगर्न प्रचण्डको भनाई थियो ।